योगसूत्र : कसरी निरोगी रहने ? - AAjakokhaber
योगको क्रियाले पनि मानवीय चेतनालाई यसका अनेक आयामसँग सम्बन्धित गर्नसक्छ । शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ज्ञान, त्याग, वैराग्य आदि अनेकौं पक्षसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ । यी सबैको केन्द्रमा गरिने सम्बन्धनलाई नै योगका रूपमा बुझिन्छ । वास्तवमा योगको उद्देश्य भनौं वा अर्थ जीवात्मालाई परमात्मासँग जोड्नसक्ने बनाउनु हो । यसरी जीवात्मा
र परमात्मालाई जोड्ने क्रिया नै वास्तविक अर्थमा योग हो ।
योगसूत्रलाई योग र ध्यानको आधार मानिन्छ । विश्वका प्रथम योगी शिवले गरेको ध्यानको मूर्ति सबभन्दा
पाइन्छन् । भगवान् बुद्धको ध्यान मूर्ति विश्वप्रसिद्ध नै छ । यद्यपि योगशास्त्र भने भगवान् कृष्णको योगदान हो र उनलाई योगेश्वर भनिन्छ । उनको उपदेश गीतालाई योगशास्त्र भनिन्छ । योगसूत्रमा बताइएका अधिकांश कुरा गीतामा पनि छन् । पतञ्जलि योगसूत्र
पतञ्जलिले योगसूत्रमा १ सय ९५ सूत्र दिएका छन् । जसलाई उनले चार खण्डमा विभाजित गरेका छन्– १. समाधि पाद (५१ सूत्र) २. साधन पाद (५५ सूत्र) ३. विभूति पाद (५५सूत्र) ४. कैवल्यपाद (३४ सूत्र) । पतञ्जलि योगसूत्रमा योगका आठ चरणलाई अष्टांग योगका रूपमा बताइएको छ । जसअन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि पर्दछन् । यिनलाई एकपछि अर्को गरेर साध्दै जाँदा जीवात्मा परमात्मासम्म पुग्छ भन्ने विश्वास
पतञ्जलिको छ ।
–प्रत्याहार विधिमा इन्द्रियलाई इन्द्रियार्थ गराउनु पर्छ । भोगले इन्द्रिय नभोगून् बरु इन्द्रियले भोगलाई भोगून् भन्ने आशय यसमा पाइन्छ । प्रति आहार अर्थात् हाम्रो
आहारको गति विपरीत हुन जाओस् भन्ने यसको आशय हुन्छ ।
–समाधि गरेर हुने नभई माथिका सबै चरण पार गरेपछि घटित हुने कुरा हो । यो योगको लक्ष्य नै हो भने पनि हुन्छ । समाधि अवस्थामा आनन्दमय, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय एवं शान्तिमय जुन स्वरूपमा पुगिन्छ त्यसपछि पूर्ण तृप्ति वा परमआनन्द प्राप्ति हुन्छ । यो अवस्थामा पुगिसकेपछि मानव जीवनमा केही पनि गर्न बाँकी रहँदैन । यस्तो अवस्थामा पुगेको योगी त्रिगुणातीत अर्थात् सत्व, रज र तम गुणबाट पर पुग्छ । उसका लागि केही पनि प्राप्त गर्न बाँकी
रहंदैन । यस अवस्थामा पुगेका योगीहरू
योगशास्त्र धार्मिक ग्रन्थ मानिन्छ तर कुनै सम्प्रदायसंग
यसको सम्बन्ध छैन । यो शारीरिक योग मुद्राको शास्त्र पनि होइन । यो आत्मा र परमात्माको योगको विषय मात्र हो । तर यसमा बताइएको समाधि प्राप्तिको अधिकार आस्तिक तथा नास्तिक दुवैलाई छ ।
पातञ्जली योगसूत्रकै आधारमा वर्तमान समयका अनेक सन्त महापुरुष र आध्यात्मिक गुरुहरूले समयसापेक्ष हुने गरी ध्यानका विभिन्न विधिहरूको विकास गरेका छन् । स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, रमण महर्षि, महर्षि महेश योगी, सत्य साई, ओशो रजनीश, पाइलटबाबा, र श्रीश्री रविशंकर, ब्रह्म बाबा आदिले ध्यानका विधिमाथि प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूबाट विपश्यना ध्यान, कुण्डिलीनी ध्यान, राजयोग ध्यान, भावातीत ध्यान, सक्रिय ध्यान, ज्योतिध्र्यान, सहजध्यान, सुदर्शन क्रिया आदि अनेकौं
तरिका विकास भएका छन् ।
Previous डेढ करोड बढी लगानीमा कृषि फार्म सुरु
Next के तपाईंले गर्भावस्थामा यौन सम्बन्ध राख्नु हुन्छ? कहिले असुरक्षित ?